Momba anay - Hebei Rubang Carbon Products Co., Ltd.
Hebei Rubang Carbon Products Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny Aogositra 2014 niaraka tamin'ny renivohitra voasoratra 25 tapitrisa yuan. Miaraka amin'ny foiben-toerany any Cheng 'an County, faritanin'i Hebei, fantatra amin'ny anarana hoe "Carbon Base China North", manana sampana roa izy: Hebei Rubang Carbon Products Co., Ltd Biraon'ny Panzhihua sy Handan Damai Carbon Co., Ltd.
Amin'izao fotoana izao ny vokatra lehibe ao amin'ny orinasa dia ny electrode electrite electrite (75mm-1200mm), electrode graphite electrode mahery (200mm-700mm), electrode electrite gratuite avo lenta (300mm-700mm), electrode square electrode ho an'ny lohan'ny lafaoro, solika voapaika coke, carbonizing agents, vokatra grafita manokana ary fitaovana karbonika vaovao, sns.
Miaraka amin'ny fahaizan'ny famokarana feno 30.000 taonina isan-taona, amidy tsara ny vokatra any amin'ny faritany mihoatra ny 20 eto an-toerana ary aondrana any amin'ny firenena sy faritra maro toa an'i Etazonia sy Japon, sns.
Ny vokatr'ilay orinasa dia amboarina mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly hahatratrarana ny tahan'ny fahazoana vokatra hatramin'ny 99,2%. Ny electrode grafit dia amidy ho vokatra lehibe maka ny toerana voalohany amin'ny vokatra rehetra.
Ny fitantanana kalitaon'ny orinasanay manontolo dia nohamafisina, namboarina sy nohavaozina noho ny fahazoana ny mari-pahaizana ISO momba ny rafitra fitantanana ny tontolo iainana.
Miaraka amin'ny fandrosoan'ny siansa sy ny haitao mitohy, ny orinasanay dia manafaingana ny fanavaozana ara-teknolojia ary manamafy ny fitantanana siantifika hitady ny foto-kevitry ny "mpanjifa aloha, ny lazany aloha" ary manitatra hatrany ny fizarana tsena.
Nandritra ny taona maro ny orinasa dia nifikitra hatrany tamin'ny "mifototra amin'ny kalitao sy ny haitao mba hamoronana vokatra sy serivisy tsara indrindra ary kalitao voalohany vokatry ny fikatsahana ny hatsarana sy ny fitarihana ireo fanovana mba hahatsapa ny filozofia momba ny fiaraha-miaina sy handresy".
Mifantoka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa sy mandroso hatrany amin'ny fikatsahana ny hatsarana, Rubang Carbon dia nanamafy ny fiaraha-miasa ara-toekarena sy ara-teknolojia ary ny fifandraisana varotra amin'ireo namana ary koa ny mpanjifa vaovao sy taloha any an-toerana sy any ivelany.
Mifantoka amin'ny fampandrosoana isan-karazany ny vokatra avy amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa mitaky amin'ny fanavaozana mitohy sy ny fampandrosoana amin'ny fototry ny antoka kalitao hatramin'ny nananganana ny orinasa, dia novolavolaina ho medium-haben'ny orinasa karbaona mba hanome fitaovana karbôna sy ny vokatra ilaina amin'ny sehatra maro.